FANDROBANA SY FAMONOANA MPANAO KIOSKA : Voasambotry ny polisy ireo tompon’antoka
Ny marainan’ny talata 5 janoary lasa teo, nisy ny fampitam-baovao nataon’ny polisim-pirenena tao Toamasina. 5 février 2019
Nitarika izany ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys, notronin’ny teo anivon’ny Fip sy ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany sy boriborintany faharoa Mangarano.
Nandritra izany no nampahafantarana ny vokatra azo, dia ny fahatrarana ireo tomponan’antoka tamin’ny fandrobana sy famonoana an’i Zafimiaraka Olivier tovolahy 31 taona maty nisy nitifitra tao Tanambao V lalam-baovao, ny alatsinainy 28 janoary lasa teo. Tsy tana ny ain’ilay tovolahy rehefa tonga teny amin’ny Hopitaly. Bala efatra no nahavoa azy. Naratra ihany koa ny vadiny saingy mbola avotra soa aman-tsara ny ainy. Vola 12 tapitrisa no lasa tamin’izany.
Telo andro taorian’ilay fanafihana, dia voasambotry ny kaomisaria bazary kely sy ny avy amin’ny UIR ireo tompon’antoka tamin’ny fanafihana. Efa-dahy izy ireo. Izy efa-dahy ireo izay efa mpamerin-keloka avokoa. I Mandigny Sorolaha no lehibeny. Ity farany izay 31 taona efa kalaza ratsy amin’ny fanaovana fanafihana mitam-piadiana. Efa nisy fotoana voatifitry ny mpitandro filaminana saingy tsy maty. Efa mpamerin-keloka tahaka azy ihany koa ireo namany telolahy : Sampy Abel Stephan 29 taona, Miaro Hay 28 taona ary i Mbola. Mbola misy namany hafa karohina. Karohina ihany koa ny basy. Porofo izao, hoy ny polisim-pirenena ao Toamasina fa tsy mipetra-mora izy ireo ho amin’ny famerenana ny filaminana ao Toamasina.
Araka ny fanazavana nentin’ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys hatrany dia ny ekipan’i Mandigny Sorolaha io no mbola tompon’antoka tamin’ny fanafihana mitam-piadiana namoizana ain’olona iray tao Ankirihiry-Avaratra ny volana mey 2018.
Ny fanazavana hatrany no nahalalana fa mampiasa moto ary misy fotoana mandeha an-tongotra ireo jiolahy sarona ireo rehefa manao ny asa ratsiny.